DAAWO VIDEO: JUBBALAND oo si kulul uga hadashay nabaddoonkii lagu Dilay Kismaayo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: JUBBALAND oo si kulul uga hadashay nabaddoonkii lagu Dilay Kismaayo
DAAWO VIDEO: JUBBALAND oo si kulul uga hadashay nabaddoonkii lagu Dilay Kismaayo
Kismaayo (Halqaran.com) – Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa waxay ka hadashay dilkii xalay Nabadoon Siciid Ciise Cabdi (Adoon) loogu gaystay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland, Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo ka hadlay dilka Nabadoon Siciid Ciise Cabdi ayaa marka hore umadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay dilka loo gaystay
“Inaa lilaahi wa inaa Ilaahi raajicuun, waxaan rabaa halkan inaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya afka Dowlad Goboleedka Jubbaland dhammaan umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan umadda reer Jubbaland iyo ehelkii uu ka baxay walaalkeen Siciid Ciise Cabdi (Xaaji Siciid), Allaha u naxariisto.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland.
Afhayeenka oo ka hadlay sida uu dilkiisu u dhacay ayaa yiri “Salaaddii Cishaha asagoo ka soo baxay Masaajid ayay dil u gaysteen kooxaha arxan-laaweyaasha ah ee shacabka Soomaaliyeed dhiigooda baneystay, ee har iyo habeen u taagan inay daadiyaan dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan.”
Isagoo ka hadlaya shakhsiyadda marxuumka ayuu yiri “Xaaji Siciid oo aan ognahay umadda Soomaaliyeed inuu ku ahaa nin qaali, ganacsade, samafala ah, mar walba u taagan umadda horumarinteeda iyo dib u soo kabashadeeda dilka ay u gaysteen waxaan lee nahay Inaa lilaahi wa inaa Ilaahi raajicuun. Samir iyo iimaan Allaha naga siiyo dhammaantayaga.”
Dhanka kale Cabdinuur Ibraahim Xuseen, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa sheegay in laamaha amniga Jubbaland ay wadaan baaritaan ka dhan ah kuwii dilka gaystay, isagoona ugu baaqay in ay gacanta ku soo dhigaan, cadaaladda horkeenaan.
“Laamaha amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay wadaan baaritaan loogu raadjooggo kooxihii dhagar-qabayaasha ahaa ee musiibadaan u gaystay walaalkeen, dhiigiisana dhulka ku daadiyay asagoo waxba ka galabsan. Waxaan rajeynaya laamaha amniga sida ugu dhakhsiyaha badan in ay sharciga ku horkeenaan kooxihii dhagar-qabayaasha ahaa, gacantana ku soo dhigaan, si looga gudo ninkaa walaalkeen ee masaakiinka ah dilka ay u gaysteen.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Siciid Adoon oo sidoo kale ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn ee Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu dilay agagaarka Sarta Calaaca ee xaafadda Calanley, iyadoo uu u dhintay rasaas ay huwiyeen rag la sheegay inay wejiyada soo xirteen.
Ugu dambeyn, bulshada reer Kismaayo ayaa hadalhaysa dilka wuxuushnimada ah ee loo gaystay Siciid Adoon, waxayna qaarkood ku baaqeen in cadaaladda la horkeeno arxan-laaweyaashii dilay.
Jubbaland oo ka hadashay
Nabadoon Siciid Ciise Cabdi (Adoon)